अब उत्तर कोरियाबाट परमाणु खतरा नरहेको ट्रम्पको घोषणा, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
अब उत्तर कोरियाबाट परमाणु खतरा नरहेको ट्रम्पको घोषणा
बीबीसी । ऐतिहासिक भनिएको वार्तापछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले उत्तर कोरिया अब परमाणु खतराको रूपमा नरहेको घोषणा गरेका हुन्।
किम जोङ उनसँगको शिखर बैठकपश्चात् उनले ट्वीट गर्दै अब सबैले सुरक्षित अनुभव गर्न सक्छन् भनेका छन्। मङ्गलवार भएको बैठकको उपलब्धीबारे कतिपय पूर्व अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरूले आशंका व्यक्त गरेका छन्।
खासगरी उनले दक्षिण कोरियासँग हुने गरेको संयुक्त सैन्य अभ्यास तत्कालका लागि रद्द गरिदिएपछि पूर्वी एसियामा विविध आशंका पैदा भएका थिए। अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओ सोही विषयबारे छलफल गर्न हाल दक्षिण कोरियामा पुगेका छन्।